Famonjàna ankizy : nahoana ireo olon-dehibe Salvadoriana no tsy miraharaha an’ireo tanora voarohirohy anaty asan-jiolahy · Global Voices teny Malagasy
Tsy mandaitra ireo politika henjana hiadiana amin'ny heloka bevava
Voadika ny 11 Mey 2022 12:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Italiano, Français, Nederlands, Português, English
Sary fanaingoana nataon'ny Globl Voices.
Ao El Salvador, noho ny fanovàna lalàna vao haingana, mikendry ny hiadiana amin'ny heloka bevava ao amin'ny firenena, mety hahazo sazy 10 taona an-tranomaizina ankehitriny ary higadra any amin'ny fonja natao ho an'ny olondehibe ireo ankizy 12 ka hatramin'ny 16 taona. Na izany aza, amin'ny maha-psykôlôgy mpahay ny fampivoarana ahy, tohanako fa tsy mandaitra ireo politika famoretana ny heloka bevava, isan'izany ireo izay mikendry ny ankizy – indrindra fa anaty firenena iray ahitàna ny fifandraisana fianakavina rotidrotika anaty vondrom-piarahamonina sy fianakaviana efa hatrany amin'ireo andian-taranaka maro.
Niaina fepetra fanao amin'ny tany misy hotakotaka i El Salvador nandritra ny 30 andro, hatramin'ny nampiakatra be ny isan'ireo vono olona tamin'ny faran'ny volana Martsa – vono olona miisa 62 tao anatin'ny 24 ora, izay midika ho andro mahery setra indrindra hatramin'ny nifaranan'ny Ady an-Trano tao amin'ny firenena. Naato ireo zo araka ny lalàmpanorenana, toy ny fahafahana manao mifamory malalaka sy ny fahazoana fiarovana tohanan'ny fanjakana eny amin'ny tribonaly. Nitsikera ireny fepetra ireny ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona, tamin'ny filazàna fa manitsakitsaka ny zon'ireo sivily ao Salvador izy ireny. Ireo ankizy no anisany marefo indrindra amin'ny filambaniny sy ny fanefena endrika ataon'ny polisy sivily sy ny tafika.
Tsy hoe tafahoatra be ny tahotr'ireo mpikatroka. Nilazàna ireo ray amandreny fa ny zanak'izy ireo dia voarohirohy miatrika fisamborana fahatany, fisavàna ary fampiatoana ny zo fototr'izy ireo. Ny tena marina, nilaza ny sasantsasany tamin'izy ireo fa tsy nahazo fidirana na fifaneraseràna tamin'ny zanak'izy ireo voafonja ry zareo.
Ampahany iray amin'ny tantaran'ireo lalàna famoretana ny heloka bevava, antsoina hoe Mano Dura (“Totohondry Vy”) ireny fanovàna ny fehezan-dalàna famaizana zaza tsy ampy taona ireny. Nankatoavina voalohany tao Salvadaoro teo ambany fitantanan'i Francisco Flores tamin'ny 2003, manome fahafahana bebe kokoa ny andraikitra ara-miaramila any anaty raharaha sivily ireo lalàna ireo ary koa ireo politika tsy ara-drariny izay ahafahana miampanga olona ho “mpikambana anatin'ireo andian-jiolahy” miainga amin'ny endriny ivelany.
Tsy irery i Salvadaoro akory amin'ireo karazana fampiharana ireo. Politika mitovy amin'io ihany koa no napetraka tao Etazonia. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, nihaona ny departemantan'ny polisy avy ao Washington, D.C., Maryland, ary Virginia ary nanangana ny Northern Virginia Taskforce (NVT). Nikendry an'ireo olona manana endrikendrika ” somary mifandraika amin'ny an'ireo andian-jiolahy” ireo fenita najoron'ny NVT. Mainty hoditra sy/na latinos no ankamaroany. Na nisy aza io fomba fiasa henjana amin'ny heloka bevava io, nitombo ny isan'ireo andian-jiolahy tao Etazonia nanomboka ny taona 2006.
Ao Salvadaoro, nanova fotsiny an'ireo fonja ho toerana fandraisana sy fanofanana ny fitomboan'ny isan'ireo voafonja avy amina fikambanan-jiolahy, ka vao mainka maharatsy ny toe-draharaha. Tao anatin'ny tapa-bolana farany, 13,000 no isan'ireo voalaza fa mpikambana avy amina andian-jiolahy nosamborina, nanampy an'ireo fonja feno hipoka ao amin'ny firenena.
Raha toa ny porofo mampiseho fa tsy mandeha ireo politika araka ny fomban'i Mano Dura sady, mifanohitra amin'izay koa, vao mainka manaratsy ny olana, nahoana ny governemanta Salvadoriana – izay manambara fa hitondra fiovàna sy fanavaozana – no miverina amin'ireo fanao taloha sy tsy mahomby ?
Ny tokony hatao, ireo ezaka dia tsy maintsy afantoka amin'ny antony fototry mahatonga ireo tanora ho tafiditra anaty andian-jiolahy. Ho an'i Salvadaoro, izany dia midika fidirana amin'ny fiatrehana ny ratram-po iombonana iainan'ireo fianakaviana sy vondrom-piarahamonina voakasiky ny ady an-trano izay naharitra 12 taona (1980-1992) tao amin'ny firenena.
Vinaniana ho sivily 75 000 no maty teny am-pelatanan'ireo tafika ambany fifehezan'ny governemanta nandritra ilay ady nifanaovany tamin'ny vovonan'ireo vondrona ankavia antsoina hoe Farabundo Marti Liberation Front (FMLN). Nitatitra ny Firenena Mikambana fa hita foana teny rehetra teny nandritra izany fotoana izany ireo fanitsakitsahana ny zo fototra maha-olombelona, toy ny fampijaliana sy ny fakàna an-keriny an'ireo sivily heverina ho mpanohana ny FMLN.
Niatrika fampidirina an-keriny ho ao anatin'ireo tafiky ny governemanta ireo ankizy, raha ireo hafa kosa niditra tao amin'ny FMLN. Manakaiky ny 80 isan-jaton'ny tafi-panjakana no zaza tsy ampy taona, raha toa ka ny ampaha-dimin'ireo mpitolona amin'ny FLMN kosa izy ireo. Na izany na tsy izany, marobe ireo ankizy no natsofoka tanaty taratasy fandraisana miaramila tamin'ny fotoanan'ny ady nandritra ny fotoana fiofanan'izy ireny. Na betsaka aza ireo ankizy miaramila tranainy tamin'ny fiafaran'ny ady, tena voahilikaa tanteraka ireny ankizy ireny tsy ho anatin'ireo fandaharanasa sôsialy marobe napetraky ny fanjakàna sy ireo ONG ikendrena ny hanohanana ny olona arakaraky ny taonany. Navela tanteraka ireo ankizy hiatrika ny zavatra mandratra fo niainany.
Tsy dia nahazo fiahiana ireo izay nifindra monina nankany Etazonia noho izy ireo tsy nekena ho toy ny mpitsoa-ponenana. Noho ny tsy fisian'ny rafitra fiahiana sahaza ao an-toerana, nanjary narefo ireo ankizy Salvadoriana ka mora voajonon'ny tetikady fisarihana ataon'ireo andian-jiolahy. Ny fampiainana zavatra tsy mahomby mandritra ny fahazazana, toy ny fampiainana ady, dia mety hitondra vokatra ratsy ho an'ny fahasalamana, fahafatesana aloha loatra sy fiovàna amin'ny fivoarana ary ny fiasan'ireo rafitra fihary (endocrine), ny hery fiarovana ary ny ny any anaty atidoha. Ny fandraisana an-tànana ireo trangan-javatra mandratra fo nandritra ny ady, dia tena ilaina ho an'ity andian-taranaka ankizy izay vavolombelon'ny ady nandritra ny fotoan-tsarotra iray ho an'ny fampivelarana ara-tsosialy sy ara-pihetseham-po ary ny fivelarana ara-tsaina.
Araka ny teôria momba ny Rafitra Biô-ekôlôjikan'i Bronfenbrenner, ny tontolo iainana mivantana, ny fifandraisana sy ny toedraharaha pôlitika sy sôsialy dia misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny ankizy. Ny teôrian'ny fifikirana, voalohany notrandrahan'i John Bowlby, ihany koa dia milaza fa ny ankizy dia mandrafitra ny fahatokisany sy ny fahalemany miainga avy amin'ny fifandraisany amin'ireo olondehibe eo amin'ny fiainan-dry zareo, ary ireny endrika fifikirana ireny dia misy fiantraikany any aoriana amin'ny fifandraisantsika amin'ny hoavy. Ireny dingana ireny dia manampy antsika handrafitra ny maoralintsika, ny soatoavintsika, ary ny maripamantarana izay amin'ny farany dia miampita any amin'ny andian-taranaka manaraka. Raha tsy misy ny fanohanana ilaina an'ilay dingana sy ny fahasitranana avy amin'ireo hetsika mahery setra nateraky ny ady, dia hifindra amin'ireo andian-taranaka ho avy ireo ratrampo. Tsy mahagaga raha niharan'ny fandraisana andian-jiolahy ny andian-taranaka ankizy Salvadoriana.
Na efa ho 40 taona lasa aza izay, mbola tsapan'ireo ankizy sy ireo fianakaviana ary ny diaspora foana ny vokatry ny ady tao Salvadaoro hatramin'izao. Ny “olana ankehitriny momba ireo andian-jiolahy” ao Salvadaoro dia tsy taratr'izay tsy mety any amin'ireo Salvadoriana akory, fa kosa taratry ny tsy fahampiana fiahiana an'ireo ankizy ao anatin'ny politikan'i Salvadaoro rotidrotika nandritry ny ady sy taorian'ny ady.
Mitovitovy amin'izay niainan'ireo ankizy miaramila ny fizaràna traikefa avy amin'ireo fanadihadiana ny ankizy tafiditra tanatin'ireo fikambanan-jiolahy. Raha ny marina, marobe ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ireo mpikaroka no manaiky ny fisian'ankizy tafiditra ho toy ny ankizy miaramila any anatina andian-jiolahy. Ohatra, soritan‘ny UNICEF ho ankizy miaramila ny :
Na iza na iza, 18 taona na latsaka, izay voaray na noraisina na nampiasain'ny vondrona mitam-piadiana iray na inona na inona sehatra misy azy. Matetika, ady mivantana no anjara asan'ireo ankizy any anaty fifandonana mitam-piadiana, fa manana anjara asa koa izy ireo ho toy ny mpitsikilo, mpikarakara nahandro, mpitondra hafatra, mpibata entana, ary andevon'ny firaisana ara-nofo ankoatran'ireo anjara asa hafa.
Fanampin'izay, tsy ananan'ireo ankizy ny fanekena araka ny tokony ho izy hanaraka an'ireo andian-jiolahy noho ny fahefana ara-pôlitika sy sôsialy ananan'ny olon-dehibe amin'ireo ankizy ao anaty fiaraha-monina.
Fotoana izao hanovantsika ny fomba hitrehantsika an'ity olana ity ary hitodihantsika amin'ireo rafitra mahomby kokoa izay mety hitondra fiovàna manan-danja. Tafiditra ao anatin'izany ny fanovàna ny fomba fijerintsika ireo ankizy voatariky ny andian-jiolahy.
Tsy vaovao ny safidy hampiasa ny politika manana endrika Mano Dura manohitra ny herisetran'ireo andian-jiolahy, tsy misy famoronana na mahomby. Raha ny tokony ho izy, fiverimberenana iray hafa eo amin'ny tsy fahombiazan'ireo olon-dehibe eo amin'ny fitondrana io manoloana ireo tanora Salvadoriana. Raha maniry hitondra fiovàna manan-danja ny fitantanan'i Nayib Bukele, dia tsy maintsy mampiasa vola amin'ireo tanora.
Ny fanovàna vao haingana natao tamin'ny fehezan-dalàna famaizana ny zaza tsy ampy taona sy ny fampihenàna ny tetibola natao ho an'ny fandaharan'asa sosialy dia mampiseho fa miverimberina ny tantara. Tsy ny fampitomboana be ny fanarahamaso no vahaolana amin'ny herisetran'ireo andian-jiolahy, ary tsy ny politikan'i Mano Dura hatrany, izay tsy nahomby tamintsika tany aloha, fa kosa fampivelarana tsara ireo tanora, ny fikarakaràna ara-tsaina amin'ny fandraisana ho anaty kajikajy ireo ratrampo sy ireo rafitra fanohanana ara-tsosialy ho an'ireo ankizy sy ireo fianakaviana.